Tababraha xaalad abuurka caanka ku ah ee Jose Mourinho ayaa jawaab aan laga filayn ka bixiyey eedayn uu u soo jeediyay ciyaaryahanka kooxda Man City Yaya Toure , taas oo hayd inuu yahay tababare hadal badan oo aan ixtiraamin naadiyada kale.
Mourinho oo had iyo jeer looga bartay inuu si kulul u weeraro cida faraha la soo gasha ama wax ka sheegta dhaqankiisa , ayaa markan u muuqday mid degenaan ku wajahaya xaalada Toure kuna ekaaday kaliya inuu difaaco naftiisa isagoo ku dooday inaanu wax xun ka sheegin Man City balse uu sheegay inay u hadheen 3 kulan oo dheeraad ahi, horyaalkana ay ku guulaysan karaan.
“Waxaan idhi oo kaliya Man City waxaa u hadhay 3 kulan wayna awoodaan inay guulaystaan dhamaan 3 daas kulanba oo ay lawareegaan hogaanka horyaalka – Hadalkaasi ma ixtiraam daraa!!? ayuu Mourinho ku yidhi waraysi uu siiyey idaacada BBC qaybteeda ciyaaraha.
“Waan ixtiraamaa Arsenal iyo Man City sidoo kalena waa la mid Man United oo aan filayo inay ka fiican tahay kooxda ay la ciyaari doonaan ee Olympiakos waxaanan rajaynayaa inay u soo gudbaan wareega 8-da”.
“Si wayn ayaan u taageeraa kooxaha ingiriiska waanan ka murugays-nahay ka hadhitaankii ay ka hadheen Arsenal iyo Man City Champions League todobaadkan”.
War Degdeg ah: Arsenal Oo Shaacisay Ciyaaraha Uu Petr Cech Ka Maqnaan Doono
“Waxaa La Joogaa wakhtigii qof kastaa wada jirka ku dedaali lahaa……”
Pellegrini Oo Codsi U Diray Taageereyaasha Kooxdiisa
Isu-Duwaha Ciyaaraha Gobolka Gebiley Oo Magacaabay Tababarayaal